सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६, ०२ : २७
निक्की इज ब्याक
नयाँ नयाँ फण्डा र विवादका कारण सधै चर्चामा रहिरहने र्‍यापर हुन् निक्की मिनाज। सेक्सिलो बदनको प्रदर्शन त सामान्य भइहाल्यो, अफेयर्स, ब्रेकअप र झगडाका कारण उनी बारम्बार मिडियामा गसिप बनिरहन्छिन्।
सोनमको जापानी हनिमुन
बलिउड सुन्दरी सोनम कपुर अहिले श्रीमान् आनन्द आहुजासँग जापानमा छिन्। उनको इन्टाग्राम हेर्दा उनीहरुले जापानमा भरपुर मस्ती गरिरहेको देखिन्छ।
कहिले पार्टी नै खोलेर नेतागिरी गर्ने त कहिले चर्चाकै लागि अन्टसन्ट बोलेर विवादमा आइरहने आइटम गर्ल राखी सावन्त लगभग बेरोजगारै भइन्। न उनले फिल्म पाउन सकिन्, न आइटमकै अफर आयो।
पुनमको पोर्नो यात्रा
पैसा कमाउन आफ्ना सेमी न्युड भिडियो क्लिप राखेर एप बनाएकी उनी केही मौका पायो कि उत्तेजक हाउभाउ सहितको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखिहाल्छिन्।
केही दिन अगाडि अमेरिकी टेलिभिजन सुन्दरी पोर्स विलियम्सको हुनेवाला श्रीमान् डेनिस मेकिनलले उनलाई चिट गरेको समाचार बाहिरिएको थियो।
पुल साइडमा मस्त टपलेस भएर पल्टिरहेकी २० वर्षीया सेलर ब्रिङकी कुकको तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै उनीबारे विभिन्न गसिप शुरु भएको छ।
विन्डी विलियम्स अहिले मार्क टम्बलिनको प्रेममा छिन्। ५४ वर्षीया विन्डी आफ्नो योङ २७ वर्षीय प्रेमी मार्कसँग हालै न्युयोर्कको सडकमा देखिएकी थिइन्।
बडी सुटमा किम
नायिका किम कार्दसियनको हालै सार्वजनिक गरेको बडी सुटको तस्वीर भाइरल भयो। खरानी कलरको बडी सुटमा किम निक्कै सेक्सी देखिएकी छन्।
सात महिना अगाडि ट्रिस्टन थम्पसनले आफूलाई चिट गरेको खुलासापछि निकै दुःखी भएकी थिइन्, कोल कार्दशियन । दुःखी नहुन् पनि कसरी ?
एन्जेलिना जोली धेरै भयो सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएकी । उनी प्रायः बाहिरै घुमफिरमा व्यस्त थिइन् । यो साता भने उनी परिवारसहित लस एन्जल्समा देखिइन् ।
रोमियो जुलियट मोह
अमेरिकी गायक निक जोनाससँग विवाह गरेपछि हरेक दिन केही न केही विषयले प्रियंका चोपडालाई चर्चामा राखिराखेको छ । कहिले दुवैको सम्बन्धमा आएको खटपट चुहिन्छ, कहिले पार्टीमा दुवैको रोमान्टिक मूडले गसिपमा स्थान पाउँछ ।
स्टारका सन्तानलाई क्या मज्जा ! जन्मदै स्टार ! त्यसमा पनि बाबुआमा दुवै स्टार भएपछि त के चाहियो ? तैमुर अली खानलाई नै हेरौँ न !